ငိုယိုတောင်းပန်ကာ သူမဆီပြန်လာပါရစေဆိုပြီးပြောထားတဲ့ စည်သူဝင်းရဲ့စာတွေကို တစ်ခုချင်းစီထုတ်ပြလိုက်တဲ့ မြတ်နိုးအိမ် – Cele Top Stars
ငိုယိုတောင်းပန်ကာ သူမဆီပြန်လာပါရစေဆိုပြီးပြောထားတဲ့ စည်သူဝင်းရဲ့စာတွေကို တစ်ခုချင်းစီထုတ်ပြလိုက်တဲ့ မြတ်နိုးအိမ်
November 30, 2021 By admin2Celebrity
ချစ်လှစွာသောပရိသတ်ကြီးရေ စည်သူဝင်းနဲ့ ခြောက်နှစ်ကျော် လက်တွဲခဲ့တဲ့ ကောင်မလေးကတော့ လူမှုကွန်ယက်မှာ ဖောက်ပြန်ထားတဲ့ အချက်အလက်တွေကို တင်ပြီး နာရီပိုင်းအကြာမှာပဲ အကောင့်အဟက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ တစ်ချို့ ပရိသတ်တွေကလည်း သူမကို အပြစ်တင် ဝေဖန်နေ တာကြောင့် အတော်လေးကို ပင်ပန်းနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင်က မြတ်နိုးအိမ်ရဲ့ Instagram အကောင့်တွင် အခုလို ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်…။
” မနက်ဖြန်ဆို ခြောက်နှစ်ပြည့်မှာ ပြောတော့ အရမ်းချစ်တယ်ဆို အရင်အမှားတွေအတွက် ပြင်ပြီး နောင်တရတယ်ဆို လက်ထပ်ကြတော့မယ်ဆို နောက်တစ်ယောက်ရှိနေတာတောင် အရမ်းချစ်ပြခဲ့ အရမ်းဂရုစိုက်ပြခဲ့တာတွေက ဟန်ဆောင်ခဲ့တာတွေပဲလား။ အားလုံး မျက်စိစုံမှိတ်ပြီး ယုံမိခဲ့တဲ့ ငါ့အမှားလား နင်ပဲ မင်းသားမို့ဟန်ဆောင်ကောင်းလွန်းခဲ့တာလား? ငါ့ကိုလည်း တစ်ချိန်လုံး love you miss you ပြောတာတွေက တစ်ဖက်ကိုလဲ အဲ့ပုံစံအတိုင်းတဲ့လား။ ငါ့အတွက်ပဲ ထင်ခဲ့တာ ၆ နှစ်လုံး ရင်နာလိုက်တာ ငါ့ဘေးမှာလဲ ငါ့ကို အရမ်းချစ်ပြ ဟိုဘက်ကိုလဲ တစ်ချိန်လုံး ချစ်ပြ။ ငါက ချစ်တယ် လွမ်းတယ် တီတီတာတာတွေပြန်မပြောတတ်ခဲ့လို့လား
စကားတွေချိုသာစွာ မပြောတတ်ပေမယ့် ဘယ်လောက်ထိအကောင်းဆုံး ရှိပေးခဲ့လဲဆိုတာ အသိဆုံးပါပဲ။ ဘဝမှာမိသားစုနဲ့ဝေးတစ်ယောက်တည်းမို့ အချစ်ငတ်ခဲ့တဲ့ ငါ့ကို လှည့်ဖျားရက်တယ်။ ရင်တွေကွဲလွန်းလို့ သေတော့မယ် ပိုဆိုးတာက တစ်ဖက်ကလဲ သိရက်နဲ့ နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး လိမ်ရက်တယ် အရူး လုပ်ရက်တယ်။ “ဆိုပြီး ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်…။
ခဈြလှစှာသောပရိသတျကွီးရေ စညျသူဝငျးနဲ့ ခွောကျနှဈကြျော လကျတှဲခဲ့တဲ့ ကောငျမလေးကတော့ လူမှုကှနျယကျမှာ ဖောကျပွနျထားတဲ့ အခကျြအလကျတှကေို တငျပွီး နာရီပိုငျးအကွာမှာပဲ အကောငျ့အဟကျခံခဲ့ရပါတယျ။ တဈခြို့ ပရိသတျတှကေလညျး သူမကို အပွဈတငျ ဝဖေနျနေ တာကွောငျ့ အတျောလေးကို ပငျပနျးနတော ဖွဈပါတယျ။ မကွာသေးခငျက မွတျနိုးအိမျရဲ့ Instagram အကောငျ့တှငျ အခုလို ရေးသားထားတာ ဖွဈပါတယျ…။
” မနကျဖွနျဆို ခွောကျနှဈပွညျ့မှာ ပွောတော့ အရမျးခဈြတယျဆို အရငျအမှားတှအေတှကျ ပွငျပွီး နောငျတရတယျဆို လကျထပျကွတော့မယျဆို နောကျတဈယောကျရှိနတောတောငျ အရမျးခဈြပွခဲ့ အရမျးဂရုစိုကျပွခဲ့တာတှကေ ဟနျဆောငျခဲ့တာတှပေဲလား။ အားလုံး မကျြစိစုံမှိတျပွီး ယုံမိခဲ့တဲ့ ငါ့အမှားလား နငျပဲ မငျးသားမို့ဟနျဆောငျကောငျးလှနျးခဲ့တာလား? ငါ့ကိုလညျး တဈခြိနျလုံး love you miss you ပွောတာတှကေ တဈဖကျကိုလဲ အဲ့ပုံစံအတိုငျးတဲ့လား။ ငါ့အတှကျပဲ ထငျခဲ့တာ ၆ နှဈလုံး ရငျနာလိုကျတာ ငါ့ဘေးမှာလဲ ငါ့ကို အရမျးခဈြပွ ဟိုဘကျကိုလဲ တဈခြိနျလုံး ခဈြပွ။ ငါက ခဈြတယျ လှမျးတယျ တီတီတာတာတှပွေနျမပွောတတျခဲ့လို့လား
စကားတှခြေိုသာစှာ မပွောတတျပမေယျ့ ဘယျလောကျထိအကောငျးဆုံး ရှိပေးခဲ့လဲဆိုတာ အသိဆုံးပါပဲ။ ဘဝမှာမိသားစုနဲ့ဝေးတဈယောကျတညျးမို့ အခဈြငတျခဲ့တဲ့ ငါ့ကို လှညျ့ဖြားရကျတယျ။ ရငျတှကှေဲလှနျးလို့ သတေော့မယျ ပိုဆိုးတာက တဈဖကျကလဲ သိရကျနဲ့ နှဈယောကျပေါငျးပွီး လိမျရကျတယျ အရူး လုပျရကျတယျ။ “ဆိုပွီး ရေးသားထားတာ ဖွဈပါတယျ…။
ပရဟိတမိဘမဲ့ကျောင်းတိုက်မှာ မွေနေ့အမှတ်တရအဖြစ်အလှူအတန်းတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ မင်းသားအောင်မင်းခန့်
သူများသမီးရည်းစားပြဿနာတွေကြားမှာ မဆီမဆိုင်ပါလာလို့ စိတ်ဆိုးနေကြတဲ့သူ့ရဲ့ ပရိသတ်တွေကိုနှစ်သိမ့်စကားပြောလိုက်တဲ့ အောင်မင်းခန့်